ရိုဇယ် (အဆိုတော်) - ဝီကီပီးဒီးယား
ဘန်ဒန်း, Fan Event တွင်တွေ့ရသော ချယ်ယောင်း၊ ၂၀၁၈ ဇွန်လ
(1997-02-11) ၁၁ ဖေဖော်ဝါရီ၊ ၁၉၉၇ (အသက် ၂၅)
၂၀၁၂၊၂၀၁၆ - လက်ရှိ
ရိုဇန် ပက်ခ် (ကျောင်းနာမည်: Roseanne Park, ၁၉၉၇ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၁ တွင်မွေးဖွား) ကို ရိုဇယ်( Korean: 로제, English : Rosé) ဟူသော အမည်ဖြင့် ပို၍ သိကြသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် "ရိုဆီ"ဟူ၍ အသိများသည်။ နာမည်ကျော် Blackpink အဖွဲ့ဝင်(၄)ဦးအနက် တစ်ဦးဖြစ်ပြီး သူမ၏ Vocal ကြောင့် ပို၍ထင်ရှားသည်။ သူမ၏ ပရိသတ်များကို Fansé ဟု ချစ်စနိုး ခေါ်ဝေါ်ကြသည်။ တောင်ကိုရီးယားအနွယ်ဝင် နယူးဇီလန်အဆိုတော်တစ်ဦး ဖြစ်သည်။ Rosé သည် ၂၀၁၂ ခုနှစ်မှစ၍ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှ YG Entertainment နှင့် စာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီး ၄ နှစ်ကြာလေ့ကျင့်ခဲ့သည်။ သူမသည် ၂၀၁၆ ဩဂုတ်လတွင် Blackpink မိန်းကလေးအဖွဲ့၏ Main Vocalist အဖြစ် စတင်ခဲ့သည်။ တစ်ကိုယ်တော်အနုပညာရှင်အဖြစ်လည်း G-Dragon ၏၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင်ထွက်ရှိခဲ့သော "Without You" သီချင်းတွင် ပါဝင်သီဆိုခဲ့ပြီး ထိုသီချင်းသည် Gaon Music Chart တွင် အဆင့်(၁၀) အထိ တက်လှမ်းနိုင်ခဲ့သည်။
၁ ဘဝနှင့် သက်မွေးဝမ်းကျောင်း
၁.၁ 1997–2015: Early life and career
၁.၂ 2016–present: Debut with Blackpink
၃ Other ventures
၄.၁ As featured artist
၇ ပြင်ပ လင့်ခ်များ
1997–2015: Early life and career[ပြင်ဆင်ရန်]
ရိုဇန် ပက်ခ် (Korean: 박채영; ပက်ခ် ချယ်ယောင်း) ကို ဖေဖော်ဝါရီလ (၁၁)ရက် ၁၉၉၇ ၌  တောင်ကိုရီးယားမှ ပြောင်းရွှေ့လာသော မိဘများမှ အော့ကလန် ၊နယူးဇီလန်တွင် မွေးဖွားခဲ့သည်။ သူမတွင် အမတစ်ယောက် ရှိသည်။ ၂၀၀၄ ခုနှစ်၊ အသက်(၇)နှစ်အရွယ်တွင် ရိုဇယ်နှင့် သူမ၏မိသားစုသည် ဩစတြေးလျနိုင်ငံ၊ မဲလ်ဘုန်းမြို့ သို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။  ရိုဇယ်သည် မဲလ်ဘုန်းမြို့ရှိ Canterbury Girls 'Secondary College တွင်တက်ရောက်ခဲ့သည်။  သူမသည် ကလေးဘဝကတည်းက သီချင်းသီဆိုခြင်း၊ ဂစ်တာနှင့်စန္ဒရားတီးခြင်းများကို သင်ယူခဲ့ပြီး ဘုရားရှိခိုးကျောင်းများတွင် သီဆိုဖျော်ဖြေလေ့ရှိသည်။
2012 ခုနှစ်တွင် အသက် 15 နှစ်အရွယ် ရိုဇယ်သည် တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှ YG Entertainment ၏ ဩစတေးလျနိုင်ငံတွင် ပြုလုပ်ခဲ့သော အရည်အချင်းစစ်ပြိုင်ပွဲကို သူမအဖေ၏ အကြံပြုချက် ကြောင့် ဝင်ပြိုင်ခဲ့ပြီး ယှဉ်ပြိုင်သူ (၇၀၀) အနက် အဆင့်(၁)ဆွတ်ခူးနိုင်ခဲ့သည်။   နှစ်လအတွင်းတွင် သူမသည် YG Entertainment နှင့် စာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့ပြီး ဆိုးလ် သို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။  ရိုဇယ်သည် အစောပိုင်းတွင် သူမအဖေ၏အကြံအစည်ကို အလှမ်းဝေးကွာမှု၊ နိုင်ငံရပ်ခြားတွင် အဆိုတော်ဖြစ်ရန် ခက်ခဲမှုတို့ကြောင့် ဟာသအဖြစ်သာ ထင်မြင်ခဲ့ကြောင်း အောက်ပါအတိုင်း ပြောကြားခဲ့သည်။ ဩစတေးလျမှာတုန်းက ကျွန်မအနေနဲ့ အဆိုတော်တစ်ယောက်ဖြစ်လာဖို့... အထူးသဖြင့် ကေပေါ့(ပ်)လောကမှာ ထင်ပေါ်ကျော်ကြားလာဖို့ အခွင့်အရေးအများကြီးရှိလိမ့်မယ်လို့ မထင်ခဲ့မိပါဘူး။ ကျွန်မဟာ ဒီလိုဖြစ်လာဖို့ အခွင့်အလမ်း တကယ်ကိုနည်းပါးပြီး အလှမ်းဝေးကွာလှတဲ့နိုင်ငံမှာ နေထိုင်ခဲ့ရတာပါ။  ထိုနှစ်တွင်ပင် ရိုဇယ်သည် YG Entertainment မှ G-Dragon ၏ EP One ofaKind (2012) အယ်လ်ဘမ်မှ "Without You" သီချင်းတွင် ပါဝင်ခွင့်ရခဲ့သည်။ သီချင်းထွက်ရှိချိန်နှင့် တချိန်တည်းတွင် Blackpink အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ကြေညာချက်ထွက်လာပြီး စာချုပ်အရ သီချင်းတွင် သူမ၏အမည်ကိုလူသိရှင်ကြားမထုတ်ပြန်ခဲ့ပါ။  ထိုသီချင်းသည် တောင်ကိုရီးယား၏ Gaon Music Chart တွင်နံပါတ် (၁၀) နှင့် <i id="mwSQ">Billboard Korea</i> K-pop Hot 100 တွင်နံပါတ် (၁၅) နေရာတွင် ရပ်တည်နိုငခဲ့သည်။  
2016–present: Debut with Blackpink[ပြင်ဆင်ရန်]
ရိုဇယ်သည် ၂၀၁၆ ဇွန်လတွင် Blackpink အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ကြေညာခြင်းမခံရမီ YG Entertainment တွင် (၄)နှစ်ကြာ လေ့ကျင့်ခဲ့သည်။ သူမသည် အဖွဲ့ဝင်(၄)ဦးအနက် နောက်ဆုံးဝင်ရောက်လာသော အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သည်။  Blackpink အဖွဲ့သည် ၂၀၁၆ ဩဂုတ်လတွင် single album Square One ကို စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ပြီး ထိုအယ်လ်ဘမ်တွင် "Whistle" နှင့် "Boombayah" တို့ ပါဝင်သည်။
အဆိုတော်ရိုဇယ်သည် ဂီတပြပွဲများဖြစ်သော King of Masked Singer နှင့် Fantastic Duo2ကဲ့သို့ အသံလွှင့်အစီအစဉ်များတွင်လည်း ဖျော်ဖြေခဲ့သည်။ King of Masked Singer မှ သူမ၏ အသံပိုင်း စွမ်းဆောင်ရည်ကို ပရိသတ်အကြိုက်တွေ့ခဲ့ကြပြီး ရိုဇယ် က"(သူမရဲ့)သီဆိုဖျော်ဖြေမှုကို ပရိသတ်တွေ နှစ်သက်သဘောကျလိမ့်မယ်ဆိုတာကို မသိခဲ့ပါဘူး(မကြိုက်မှာ စိုးရိမ်နေခဲ့ရပါတယ်)၊ ကောင်းမွန်တဲ့ရလဒ်ထွက်ရှိလာတဲ့အခါမှာတော့ ပျော်ရွှင်ပြီးစိတ်သက်သာရာရသွားပါတယ်" ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင် ရိုဇယ်သည် Fantastic Duo ၏ ဒုတိယရာသီတွင်လည်း ဖျော်ဖြေသူတစ်ဦးအဖြစ် တွေ့မြင်ခဲ့ရသည်။ ရှိုးပွဲ ထုတ်လုပ်သူက ရိုဇယ်၏ အသံစွမ်းရည်ကို ပြသရန်ရည်ရွယ်ခဲ့ပြီး Blackpink အဖွဲ့နှင့် မသက်ဆိုင်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။  ၂၀၂၀၊ ဇွန်လ (၂) ရက်တွင် YG Entertainment က Blackpink ၏ပထမဆုံးအယ်လ်ဘမ်အပြည့်အစုံထွက်ပေါ်ပြီးနောက်တွင် လီဆာ၊ ဂျီဆူး၊ ရိုဇယ်တို့၏ Solo Track ကို မိတ်ဆက်နိုင်ဖွယ်ရှိသည်ဟု ၂၀၂၀၊ ဇွန်လ(၂) ရက်တွင် ကြေညာခဲ့သည်။
ရိုဇယ်သည် Blackpink အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်လာပြီးနောက် သူမ၏ ထူးခြားဆန်းသစ်သောအသံစွမ်းဆောင်ရည်အပေါ် ကေပေါ့ပ်အသိုင်းအဝိုင်း၏ အသိအမှတ်ပြုမှုကို ရရှိခဲ့သည်။ Fantastic Duo2၏ အပိုင်းတစ်ခုတွင် ရိုဇယ်ပါဝင်ဖျော်ဖြေပြီးနောက် ဂီတဆိုင်ရာစံပြပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ် ရိုဇယ်မှသတ်မှတ်ထားသော Gummyက"[ရိုဇယ်ရဲ့] အသံဟာ ထူးခြားပါတယ်။ ဒါဟာ လူငယ်တွေ နှစ်ခြိုက်လေ့ရှိတဲ့ အသံမျိုးပါပဲ" ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
ရေဒီယိုအင်တာဗျူးတစ်ခုတွင် ရိုဇယ်သည် Big Bang အဖွဲ့မှ Taeyang ကိုသူမ၏ဂီတလမ်းကြောင်းအတွက် စံပြပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ် ရည်ညွှန်းပြောဆိုခဲ့သည်။  ရိုဇယ်သည် အမေရိကန်အဆိုတော် Tori Kelly သည်လည်း သူမ၏ သီဆိုမှုကို အားတက်စေသည်ဟု ယူဆသည်။
၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် ရိုဇယ်နှင့် Blackpink အဖွဲ့ဝင် ဂျီဆူး တို့သည် တောင်ကိုရီးယားအလှကုန်အမှတ်တံဆိပ် Kiss Me အတွက် မော်ဒယ်များအဖြစ်ရွေးချယ်ခံခဲ့ရသည်။ ၂၀၁၉ အောက်တိုဘာတွင် ရိုဇယ်သည် Perfect World Entertainment ၏ MMORPG (Perfect World Mobile)ဂိမ်းအတွက် ပရိုမိုးရှင်းမော်ဒယ်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် Anthony Vaccarello က Yves Saint Laurent အတွက် Global Ambassador အဖြစ် ရိုဇယ်အား ခန့်အပ်ခဲ့သည်။ 
၂၀၂၀ ဧပြီလတွင် ရိုဇယ်သည် အင်စတာဂရမ် ၌ Follower အများဆုံး 50.4 သန်းကျော်နှင့်အတူ စတ္ထုမြောက် Follower အများဆုံး K-pop Idol ဖြစ်လာခဲ့သည်။  ရိုဇယ်သည် ကိုရီးယားနာမည်ကျော်များအား အွန်လိုင်းရှာဖွေမှုနှင့် Engagement အများဆုံးတို့ကို လေ့လာသော ကိုရီးယားနိုင်ငံ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသုတေသနဌာန၏ အမျိုးသမီးနာမည်ကျော်များစာရင်းတွင် ၂၀၁၈ ခုနှစ်မှစတင်၍ ပါဝင်လာခဲ့သည်။ထိုစာရင်းတွင် သူမသည် အဆင့်(၁၀)အတွင်းသို့လည်း ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်သည်။
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ တွင်ကျင်းပသော ၃၃ ကြိမ်မြောက် Golden Disc Award ဆုပေးပွဲမှ ရိုဇယ်
(G-Dragon feat. Rosé)[မှတ်စု ၁]
↑ Credited as "? of YG New Girl Group" at the time of the release.
2017 King of Mask Singer MBC Contestant "Circus Girl" Episodes 103–104 
Fantastic Duo SBS Contestant "Australia 400:1" Season 2, Episodes 19–20 
↑ BLΛƆKPIИK on Instagram: "#BLACKPINK #블랙핑크 #ROSÉ #로제 #HAPPYBIRTHDAY #2018_02_11 #YG" (in en)။
↑ HAPPY BIRTHDAY ROSÉ#BLACKPINK #블랙핑크#2018_02_11 #HBD #로제pic.twitter.com/AJEnRLeSyD (in en)။
↑ ၄.၀ ၄.၁ "Rose from Blackpink – New Zealand-born K-pop singer with the unique voice and difficult dance moves"။
↑ ၅.၀ ၅.၁ "BlackPink's Rose: Howajoke turned into K-pop stardom for an Australian singer"။
↑ ၆.၀ ၆.၁ ၆.၂ "4 things to know about K-pop star Rose, BLACKPINK's high-note singer"။
↑ Moon၊ Kat။ "Everything to Know About K-Pop Group BLACKPINK"၊ Time၊4April 2019။ 31 May 2019 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Ji၊ Seung-hoon။ "[Y기획②멤버를 알면 '진짜' 블랙핑크가 보인다]"၊ YTN၊7July 2018။ 28 May 2019 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "블랙핑크, 지난 6년의 데뷔사" (in ko)။ 28 May 2019 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၁၀.၀ ၁၀.၁ 2012년 39주차 Digital Chart (in ko)။ Gaon Music Chart။ 28 May 2019 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၁၁.၀ ၁၁.၁ G-Dragon Korea K-Pop Hot 100 Chart History။ 25 September 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 28 May 2019 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Sung၊ Mi-kyung။ "YG, 새 걸그룹 네번째 멤버 로제 공개..호주 출신 실력파..'강렬'" (in ko)၊ Osen၊ 22 June 2016။ 28 May 2019 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Benjamin၊ Jeff။ "Blackpink's Major Debut: New K-Pop Girl Group Lands No. 1 &2on World Digital Songs Chart"၊ Billboard၊ 16 August 2016။ 30 May 2019 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၁၄.၀ ၁၄.၁ Park၊ Chan-soo။ "[Oh!쎈 컷'판듀2' 로제 "YG오디션, 400:1 경쟁 뚫고 합격"]"၊ Osen၊4August 2017။ 29 May 2019 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "YG, "ROSÉ·LISA·JISOO Will Release Solo Tracks… Will Start Releasing in Sequential Order After the Release of BLACKPINK's Full-Length Album in September""၊ June 2, 2020။4June 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Lee၊ So-dam (22 November 2017)။ [화보 블랙핑크 로제 "목소리 특이한 줄 몰랐다..선물 받은 기분"] (in ko)။ Osen။ 29 May 2019 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Cho၊ Eun-sol။ "<강타의 별이 빛나는 밤에> 블랙핑크의 음색 대통령, 로제의 롤모델은 누구!?"၊ imbc၊ 29 June 2017။ 13 June 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "블랙핑크 지수X로제, 메이크업 브랜드 모델 발탁..트렌디 매력UP" (in ko)၊ 27 September 2018။
↑ Blackpink's Rosé revealed as the face of MMORPG Perfect World (in en-US) (2019-10-20)။
↑ "Blackpink's Rosé Is A Saint Laurent Ambassador For A New Era"၊3July 2020။
↑ "Top 10 Kpop Idols on Instagram – Best of 2020"၊ Seoulz၊ 8 April 2020။ 12 July 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ [브랜드평판 걸그룹 개인 브랜드 2018년 8월 빅데이터 분석결과...1위 레드벨벳 슬기, 2위 블랙핑크 제니, 3위 마마무…] (in ko)။ Korean Business Research Institute (19 August 2018)။5May 2019 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 30 May 2019 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ [브랜드평판 걸그룹 개인 브랜드 2019년 2월 빅데이터 분석결과...1위 블랙핑크 제니, 2위 여자친구 소원, 3위 트와이…] (in ko)။ Korean Business Research Institute (17 February 2019)။ 31 March 2019 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 30 May 2019 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၂၄.၀ ၂၄.၁ Gaon Download Chart of 2012။ 29 May 2019 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Jo၊ Hae-jin။ "'복면가왕' 블랙핑크 로제, 엄마 언급에 눈물 왈칵 "자랑스러운 딸 되겠다"" (in ko)၊ ENews24၊ 26 March 2017။ 29 May 2019 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Park၊ Chan-soo။ "[Oh!쎈 컷'판듀2' 로제 "YG오디션, 400:1 경쟁 뚫고 합격"]" (in ko)၊ Osen၊4August 2017။ 29 May 2019 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Blackpink ၏ ဖေ့စ်ဘုတ်စာမျက်နှာ
Rose ၏ Instagram
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ရိုဇယ်_(အဆိုတော်)&oldid=719743" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၄ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၈:၅၆ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။